ComputerXplorers | Vana Franchise | Franchiseek
Joinna UK inotungamira yevana computa franchise
Gadzirira vana ramangwana nerinonakidza uye inonakidza tech makirabhu
Isu tinounza huwandu hwakanyanya hwepamusoro-hunonakidza, hwekudzidzisa uye hwekukurudzira tekinoroji uye makomputa makirasi kuUK. Makirasi anonunurwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira maredhiyo, zvikoro, zvikoro zvehoridhe, makirabhu epashure pechikoro, makirabhu ekupera kwevhiki uye dzimwe nzvimbo dzenharaunda. Isu tinodzidzisa vana kwete chete izvo zviri kumashure kwetekinoroji, asi kuvaka kuvaka kwakasimba kufunga, kubatana, kutaurirana, kusika uye kuvimba. Kana iyo mukana wekuita mutsauko kune remangwana revana rakaputirwa mune bhizinesi mukana nemitengo yakaderera kudaro, yakakwira mikana yekuwana uye kuchinjika iboka rine simba.
100% mari iripo - taura nesu kuti uzive zvimwe
Yedu chaiyo yakasarudzika mitauro inonakidza uye inonakidza zviitiko Isu tinogadzira yedu yekutungamira-kumucheto kosi kudzidza kuve nechokwadi chekuti ese edu makosi anonakidza zvachose, kuita uye kudzidza. Isu tinotarisa pamusanganiswa wehunyanzvi hwekuita tech uye kufunga kwekumanikidzana kwakasanganiswa nehunyoro nyoro sekudyidzana, kutaurirana nekugadzirisa matambudziko, uye hongu kazhinji kazhinji kunowedzera kuverenga nekuverenga pamwe chete. Iyo yakakura midhiji inotonhorera - makadhi, marobhoti uye zvimwe zvakawanda! Nhamba yedu yakawandisa yemakirasi ekunyora makodhi yakakurumbira zvakakurumbira uye isu tine kunyange yakanyanya kunaka tech zviitiko kunze! Aya niwo angoriwo mamwe makosi atinopa - 3D dhizaini uye kudhinda, chokwadi chakasimbiswa, dhizaini dhizaini, hupenyu hwemifananidzo, dhizaini yemitambo, marobhoti, uinjiniya, zvemagetsi uye hunyanzvi hweMececraft hwekuita - pamwe nezvese zvedu chokwadi! Mubatanidzwa unohwina unovimbisa zvikoro, vabereki nevana vanoramba vachidzoka.
Sei Sarudza ComputerXplorers?
Kuderera kwekutanga dura - 100% mari inowanikwa
Maawa anoshandurwa kuti akwane mararamiro ako
Batsirai vana kuita kusvetuka kubva kune vatengi vetekinoroji kusvika kune yekugadzira kugona!
Turnkey bhizinesi - rakazara rekutanga kumusoro rakapihwa
Kugadzwa kugadzira basa kuti uwane iwe muzvikoro zvemunharaunda
Dzidzo izere uye nyanzvi inoenderera mberi rutsigiro
Kubudirira kukuru - hapana rendi, hapana mitengo uye inodzorwa vashandi vashandi
Hapana chakaitika chekare muIT kana dzidzo inodikanwa!
Ndeipi soko redu?
Musika wacho ndiHUGE… Iko kudikanwa kwevana kuvandudza hunyanzvi hwekomputa iko ikozvino kwazivikanwa. Kutsetsenuka uye kujairana nemakomputa uye tekinoroji kwakakosha kuti ukure chizvarwa chedijithali chizvarwa uye kuve nechokwadi kuti vana vemazuva ano vanogadzira tekinoroji kwete kungoita vanongoshandisa chete iwo. Kudiwa kuri kuputika apo vadzidzisi uye vabereki vanoziva kukosha kwehunyanzvi uhu ... uyezve, vana vari kuwana mufaro wakawanda havaone kuti vangani vari kudzidza!
Nemi munzira mose Iko kudyidzana pakati pe franchisee uye franchisor kwakakosha pakubudirira kwenguva refu kwebhizinesi. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti franchisor yako bhizinesi raunogona kuvimba naro. NeComputerXplorers unogona kuve nechokwadi kuti iwe une franchisor ine ruzivo uye ruzivo uye kuzvipira kupa kuenderera mberi kwebhizinesi rutsigiro.
Zvakakosha bhizinesi ruzivo kubva kune mubairo-kuhwina franchisor
Nyanzvi inozivikanwa mune dzidzo yekombuta yevana
Nyanzvi yakagadzirwa bhizinesi system
Kuenderera mberi kwekwidzidzo yekuvandudza uye kuongorora software
Zvirongwa zvepakati zvekushambadzira zvakagadzirirwa kuwedzera bhizinesi rako mukukura
Yakaratidza kugadzwa-inogadzira system ichikubatsira iwe kuti uwane kuwana kune vanoita sarudzo
Yakawanda kushambadzira chibvumirano
Yakakwana induction kudzidziswa chirongwa yakapararira kwevhiki nhatu
Kuenda kune rimwe-kune-rimwe bhizinesi zano
Yemusangano wenguva dzose inodaidzira kugovera maitiro akanaka uye maitiro matsva
ComputerXplorers inopa mbiri dzakasiyana sarudzo: ComputerXplorers Classic uye ComputerXplorers Inovandudzwa. Sarudzo 1: ComputerXplorers Classic Nzvimbo yeComputerXplorers, yakasarudzika kwauri, ine zvikoro zvishoma zve150 zvepuraimari uye mazana mashanu nemakumi mashanu Mutengo £ 14,950 pamwe VAT. Nzvimbo dzekuwedzera dzinogona kutengwa pane imwe nguva yepamberi maererano nekuwanika. Sarudzo 2: ComputerXplorers Yakakwidziridzwa Nzvimbo huru yakasarudzika kwauri ine zvishoma makumi matatu zvikoro zvepuraimari uye Zvitoro mazana matatu Mutengo: £ 29,500 kuwedzera VAT. With 100% mari iripo pane iyo yakasarudzika sarudzo, inowanikwa kune wese munhu! Bata nesu kuti uzive zvimwe. Kuenderera mberi kweumambo
Mari yekubhadhara (sepesenti yekudzoka kwemwedzi) 10%
Mari yekushambadzira (muzana mupiro unobva pamari inowanikwa) 1%
Zvinopa mubayiro kuona mwana mumwe nemumwe achibudirira, ini naStephanie tinofarira kunzwa nezvekuti vanoenderera mberi sei nekudzidza kwavo pavanosvika kumba. Kunyanya kukosha ComputerXplorers yakarongedza hupenyu hwangu uye kundigonesa kutarisisa pane zvakakosha kwandiri.
Yedu akanakisa tech mapurogiramu anopa yakakwirira kurovana nhanho uye inopa yakakura WOW chinhu chevana.
ComputerXplorers vanoita chaizvo zvavanenge vavimbisa kuti zvavanoita uye zvinobatsira kuti ivo vakanaka kudaro timu yevanhu yekushanda navo.
Kana iwe uchitsvaga mukana unochinjika wokumhanyisa bhizinesi rako uye wotanga kuita mutsauko kuvana munharaunda mako, chiuya utaure nesu nezve kuti pamwe tingagadzirira vana sei ramangwana.